CRYENGINE 5.4 Ongororo yaburitswa nerutsigiro rweVulkan | Linux Vakapindwa muropa
Nhau dzakanaka dzenyika yekutamba. CRYENGINE 5.4 Ongorora Yakave yakaburitswa uye inouya nerutsigiro rweVulkan, chimwe chinhu chinonakidza chaizvo nekuda kwesimba reiyi graphic API iri kuwana nzvimbo paOpenGL nekuda kwerubatsiro rwakakura rwakaitwa ne AMD kunyika yemifananidzo. Kune avo vasingazive CRYENGINE parizvino, iginjini yemagetsi yakagadzirwa naCrytek, uye pakutanga seinjini yekuyedza yeNVIDIA uye yakazoshandiswa muUbisoft mitambo yemavhidhiyo senge FAR CRY. Inotsigira Linux uye Android ...
Zvakanaka, nekuburitswa kutsva uku, vagadziri vayo havana kubatanidza zvakare uye hapana pasi pe620 yekuvandudza. Pakati pavo pane zvimwe zvinogadziriswa zvetsikidzi senguva dzose, uye zvakare matsva mashandiro. Pakati pavo pane kuiswa kwe tsigiro yeVulkan API. Kunyangwe ichiri mudanho rekutanga rekusimudzira, inogara iri nhau dzakanaka kuona imwe yeanonyanya kuzivikanwa mavhidhiyo enjini anowana rutsigiro urwu. Uye kunyangwe iyo rutsigiro iri rwePC, ichakurumidza kuwedzerwa kune Android mune ramangwana futi, zvirinani ndicho chinangwa.
Sezvandinotaura, nhau dzichiripo ivo havana Linux yakatarisana, asi hapana chinoratidza kuti havachaunze chimiro ichocho kuchikuva chepenguin zvakare, sezvo sekutaura kwandakaita mundima yekutanga vanotsigira masisitimu aya. Izvo zvanga zvichitaurwa kuti vamwe vashandi vaishanda vasina mubhadharo kuti vawedzere iyi rutsigiro kuLinux futi, asi parizvino idzi ingori runyerekupe. Tichafanirwa kumirira kuti tione zvinoitika mune imwe nguva, asi zvirokwazvo ndinovimba chimiro ichi chinosvika kuLinux futi. Zvinenge zvisina musoro kana zvikasaitika.
Chokwadi ndechekuti kune akawanda mazita mukati chiutsi, Chitoro cheValve chinoshandisa injini yemifananidzo iyi, saka gamuchirai kuvandudzwa uku uye neiri kuuya. Pasina nguva vashandisi veSteamOS uye mamwe maGNU / Linux distros vachakwanisa kuanakidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » CRYENGINE 5.4 Ongororo yaburitswa nerutsigiro rweVulkan
Mwari vanzwei. Ini ndoda ivo kuti vatore zvimwe Far Cry kuLinux.